merolagani - चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ७० अर्बले बढ्यो बैंकहरुको कर्जा लगानी, कुन बैंकले कति बढाए ?
चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ७० अर्बले बढ्यो बैंकहरुको कर्जा लगानी, कुन बैंकले कति बढाए ?
Apr 16, 2021 01:52 PM Merolagani
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकहरुको कर्जा लगानी साढे ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स सँघको तथ्याँक अनुसार चैतसम्ममा बैंकहरुको कर्जा लगानी ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
चैत मसान्तसम्ममा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ३५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। गत असारसम्ममा बैंकहरुको कर्जा लगानी २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो। यस अवधिमा कर्जा लगानी २३ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्षभन्दा कर्जा विस्तार उच्च
चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा कर्जाको बृद्धिदर उच्च देखिएको छ। बैंकर्स सँघको तथ्याँक अनुसार गत आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ३ खर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको कर्जा लगानी यस वर्ष कर्जा लगानी ६ खर्ब भन्दा धेरैले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकहरुले २४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए।
कोराेना महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेसँगै आयात पनि ह्वातै बढेको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढेको छ। पछिल्लो समय बैकहरु कर्जा लगानीमा एग्रेसिभ देखिएका छन् ।
निक्षेपको बृद्धिदर पनि यस वर्ष धेरै
बैंकहरुको निक्षेप संकलन पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा धेरै देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँले बढेको निक्षेप संकलन यस वर्ष ४ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
गत वर्षको अन्त्यसम्ममा ३४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको निक्षेप संकलन बढेर ३९ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन १३ प्रतिशतले बढेको हो।
सबैभन्दा धेरै बिजनेस बढाउनेमा एनआइसि एशिया
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै बिजनेस बढाउने बैंकको पहिलो नम्बरमा एनआइसि एशिया बैंक रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकले ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरले कर्जा बढाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।
बैंकको निक्षेप संकलन पनि सबैभन्दा धेरै रहेको छ। चैत मसान्तसम्ममा बैंकले कुल २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नै बैंकको कर्जा तथा निक्षेप संकलन ८४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
कर्जा लगानीमा स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक सुस्त
पछिल्लो समय कर्जा लगानीमा पनि स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक सुस्त देखिएको छ। तथ्याँक अनुसार बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले मात्रै कर्जा लगानी बढाएको छ। जुन वाणिज्य बैंकहरु मध्यकै सबैभन्दा कम हो।
यसैगरी, नेपाल बंलालादेश बैंकले पनि ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले मात्रै कर्जा लगानी बढाएको छ भने नेपाल एसविआई बैंकले ७ अर्ब ४७ करोड र एभरेष्ट बैंकले ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बढाएको छ।
तीन बैंकको निक्षेप संकलन घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३ बैंकको भने निक्षेप संकलन घटेको छ। बैंकर्स सँघको तथ्याँक अनुसार स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक, नेपाल एसविआई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको निक्षेप संकलन घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको निक्षेप संकलन ९९ अर्ब ११ करोडबाट घटेर ८४ अर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ भने नेपाल एसविआई बैंकको १ खर्ब १० अर्ब ४० करोडबाट घटेर १ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पनि १ खर्ब ६८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबाट घटेर १ खर्ब ६७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। अन्य बैंकको भने निक्षेप संकलन बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
अन्य बैंकमा निक्षेप र कर्जाको अवस्था कस्तो हेरौँ
यस अवधिमा २७ वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी औसतमा २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यस अवधिमा ७ बैंकको कर्जा लगानी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको छ।
त्यस्तै निक्षेप संकलन पनि औसतमा १६ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। जसमा ४ बैंकको निक्षेप संकलन ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको छ।
प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने सिभिल बैंकले यस अवधिमा कर्जा लगानी सबैभन्दा धेरै बढाएको छ। ९ महिनामा बैंकले कर्जा लगानी ५१ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसैगरी निक्षेप ४६ प्रतिशतले बढाएको छ।
Amount In Billions
ऋण लिने व्यक्ति डुबे पनि बैंक भने यसकारण उत्रन्छन्, बैंकबाट ऋण लिने भन्छन्, ‘मिटर घुमाइमा फस्दै आएका छौं’
May 05, 2021 06:35 PM
बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने व्यक्ति डुबेपनि बैंक भने उत्रने गरेका छन् । बैंकले व्यक्तिको सम्पत्ति प्रयाप्त मात्रमा धितोको रुपमा लिने भएकाले पनि व्यक्ति डुबेपनि बैंक भने उत्रने गरेका हुन् ।
एकैदिन साढे आठ हजार भन्दा धेरैमा काेराेना संक्रमण पुष्टि, मृतकको संख्या ५८
May 05, 2021 04:41 PM
म्युचुअल फण्ड प्रवर्धक कर्मचारीले अब तलबको २० प्रतिशत इकाई लिनै पर्ने, तलब स्वरूप पाएको इकाई तीन वर्षसम्म बेच्न नपाइने
May 05, 2021 04:36 PM
हाइड्रोपावर कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै, १६ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार
May 05, 2021 03:39 PM
प्राथमिक शेयरमा अनलाइन आवेदन दिने ९५ प्रतिशत पुगे, बन्दाबन्दीमा पनि आइपिओ भर्नेको नयाँ रेकर्ड
May 05, 2021 02:48 PM
तेस्रो त्रैमासमा १८ फाइनान्सको अवस्था कस्तो? सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा मञ्जुश्री फाइनान्स
May 05, 2021 01:56 PM